Global Voices teny Malagasy » Ho An’ny Kiobàna Mpanohitra, Midika Fanantenana, Tahotra Ary Hatezerana Ny Famitranam-pihavànana USA-Kiobà. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Desambra 2014 3:18 GMT 1	 · Mpanoratra Ellery Roberts Biddle Nandika avylavitra
Sokajy: Etazonia, Kiobà, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Damas de Blanco na Vehivavy mitafy Fotsy manao fihetsiketsehana ao Havana, Kiobà 2012. Photo by Hvd69 via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Fanantenàna, tsy dia fanànana toky loatra ary hatramin'ny hatezerana teny anivon'ireo bilaogera sy mpitolona mpanohitra ny governemanta no naterak'ilay fanambaràna ny fanavaozana ny fifandraisan'i Etazonia sy Kiobà natao tao Kiobà tamin'ny herinandro lasa.
Marobe ireo feo manohitra ankehitriny no manahy ny hoe tsy nanisy resaka mafonja loatra mampifandray ny fifamatorana diplaomatika sy ny fanatsaràna ny zon'olombelona ao amin'ny nosy i Etazonia.
Raha niresaka tamin'i Diario de Cuba , nolazain'i Antonio Rodiles , mpiaro ny zon'olombelona sy mpanorina ny sehatra fifanakalozan-dresaky ny nahita fianarana “Estado de SATS ” fa hadisoam-pamindra no nataon'i Obama tamin'ny nandraisany fanapahankevitra hifampiraharaha amin'ireo Kiobàna manampahefàna nefa tsy mba naka ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena tao amin'ilay nosy. “Hadisoana goavana be amiko ny fanomezan-javatra ho an'ny fitondràna nefa tsy mitaky na inona na inona ho tambiny.”
Marobe ireo feo manana ny maha-izy azy avy ao Kiobà sy avy any ivelany, toa an'i Rodiles, no hita hatrany tamin-kery ety anaty aterineto , ary ny andian'ireo mpanohitra efa zokinjokiny dia mahita ilay fiovàna ara-politka ho toy ny iray izay hanome hery ny governemanta Kiobàna hampitombo ny fifehezana ny fiarahamonina sosialy sy ny famoretana ireo mpikatroka mafàna fo mpanohitra ny governemanta.
Ety anaty media sosialy, hatramin'ny nanambaràna ilay fiovàna dia maro no manely ny toe-pon'ireo Amerikana mpanao lalàna mpifikitra amin'ny nentin-drazana. Ny Las Damas de Blanco  (“Vehivavy mitafy Fotsy”), fikambanana iray ahitàna vehivavy miara-manao diabe ho firaisankina amin'ireo mpanao gazety nofonjaina sy ireo hafa gadra noho ny resaka politika tao amin'ny nosy, dia namerina nibitsika sy nanasongadina ireo fanehoankevitra avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny kaongresy Amerikana, toa an'i Marco Rubio  sy Robert Menéndez , izay samy misolo tena ny vondrom-piarahamonina “henjam-pihetsik” ireo mpitsoa-ponenana any Etazonia manohitra an'i Castro.
Berta Soler, mpitarika ilay vondrona, no iray amin'ireo feo tena mpanohitra ny governemanta ao amin'ny nosy, hoy i Diario de Cuba :
Ho an'ny governemanta ireo fepetra noraisin'ny filoha Obama fa tsy ho an'i Kiobà. Hadisoana ny azy raha toa izy mihevitra fa hitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka eto amin'ny nosy ireny famerenany ny fifandraisana ireny. Hisy ny fiovàna eto rehefa ny zon'olombelona no voahaja ary tsy misy intsony ry Castros.
Amin'ny fotoana tahaka itony dia mahatsiaro tsy voaaro isika, saingy na misy na tsia ny fanohanana, ny zava-dehibe dia ny fanohizantsika ny tolona ho amin'ny fahalalahan'ny vahoakan'i Kiobà.
Hatramin'ity anio ity, olona voafonja sy voadaroka isika. Ankehitriny dia mino isika fa hanomboka hahita mpikatroka mafàna fo hitsitra maty eny an'arabe.
Fantatra amin'ny fanekeny mandray tohana ara-bola  avy amin'ireo masoivohon'ny governemanta Amerikana, maro amin'ireo mpikambana ao amin'ny Damas de Blanco no niharan'ny vono, famonjàna sy endrika hafa amin'ny famoretana ataon'ireo mpitandro filaminan'ny fanjakàna Kiobàna, hatramin'ny nanombohany tamin'ny 2003. Tamin'ity herinandro ity anefa, voamarik'ireo mpanohana fa azon'izy ireo natao ny nanao diabe tamin-kalalahana, tsy nisy fisamborana na iray aza:
Afaka nanao diabe avy ao Cárdenas y Colón tsy nisy fisamborana, filàna vaniny na daroka toy izay efa fanaon'ireo hery mpamoritra isaky ny mihetsika ny @DamasdBlanco.
Maro no nahatsiaro ny asan'ilay mpitarika ny fiarahamonim-pirenena sivily efa nodimandry, Oswaldo Payá , nitarika ny ezaky ny fiarahamonim-pirenena sivily tany amin'ny faramparan'ny 1990 mba hitakiana ny hanaovana fitsapankevi-bahoaka momba ny lalàm-panorenan'ny firenena izay tokony hanome lanja ny zo handray anjara feno amin'ny resaka fifidianana, ny fahalalahana maneho hevitra, ary zo fototra hafa isan-karazany ho an'ny Kiobàna rehetra. Maty taminà lozam-pifamoivoizana iray tamin'ny 2012  i Payá, izay ahiahian'ny fianakaviany ho ireo Kiobàna manampahefana no nikotrika azy, na dia tsy mbola voaporofo mihitsy aza izany hatreto. Hatramin'ny nahafatesany, Rosa María zanaka vavin'i Payá no lasa feo manana ny toerany amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ao amin'ny firenena, na dia manaraka zotra hafa tsy toy ny an'ny rainy aza izy.
Tao anaty taratasy iray misokatra nalefa ho an'i Barack Obama  navoakan'ny Washington Post, nanoratra i Rosa María Payá hoe :
Atoa. Filoha, tsy ny lalànao no mibahana ny tsena malalaka sy ny fahafahana mahazo ny vaovao aty Kiobà ; fa ny lalàn'ny governemanta Kiobàna sy ny sivana tsy mitsahatra ataony.
Ny zavatra mety ho vaovao dia ny fifanekena ifanaovana amin'ny vahoaka Kiobàna, miaraka aminà asa mivaingana manohana ny fangatahan'ny olom-pirenena. Tsy ilainay ny tetikady fitsabatsabahana fa fanohanana ireo vahaolana izay izahay Kiobàna irery ihany no nandrafitra azy.
Saingy tsy ny feo manohitra rehetra akory no manana fijery miiba. Reinaldo Escobar, mpanao gazety lasa nivadika ho bilaogera, sady vadin'ilay bilaogera malaza Yoani Sánchez, dia naneho fanantenana  hoe mety ho diso ihany ireny vinavina ireny :
Ilokàko fa ho ratsy ny fandehan-javatra, saingy enga anie mba ho diso izay filokàko izay. Ny fambàra rehetra sy ny zavatra niainana fahiny dia samy manosika hihevitra fa ho fomba iray vaovao ho an'ny fitondràna io mba hakàna fotoana, nefa hetsika iray tsy manam-paharoa io ary mety mba ho hafa mandrakariva ny fandehan-javatra.
Manuel Cuesta Morúa , mpitarika ny Partido Arco Progresista — vondrona politika mpandàla fiovàna sy manohitra ny antoko kaomionista Kiobàna — dia nanoritra fomba telo  tokony ho azon'ireo fiovàna atao hanatsaràna ny toe-piainan'ny Kiobàna:
Voalohany, hahafahana manome toerana ny firaisankina erantany bebe kokoa io ho fanohanana ny tetikadinay amin'ny resaka loharanon-karena, olona ifampikasohana sy ny fifandraisana. Faharoa, ho azo atao ny mamotika tsy hisy intsony ny fitantaran'ny fitondràna, izay tsy nanao afa-tsy ny niampanga anay, ny mpanohitra, ho miasa ho an'ny tombontsoan'ireo firenena vahiny, ambonin'ireny rehetra ireny i Etazonia. Fahatelo, nefa tsy ny maivana indindra, tsy ho voapoizina be loatra ny fifampikasohanay amin'ireo Kiobàna any amin'ny faritra hafa eto amin'ny firenena satria ankehitriny ireo olom-pirenena, izay manome ny maha-izy azy ireo tolokevitra politika, dia ho afaka bebe kokoa handray anjara sy hifampitankosina aminay.
Yoani Sánchez, bilaogera ary tonian-dahatsoratr'ilay gazetiboky ety anaty aterineto 14ymedio , vao noforonina vao haingana, dia nanasongadina ny fomba niasàn'ny ady mangatsiaka teo amin'i Etazonia sy Kiobà ho toy ny milina nanetsika ny governemanta Kiobàna.
…na teo aza ny tsy fisian'ny fileferana ara-politika avy amin'ny lafy Kiobàna, ny zavatra niseho androany dia filavoana ara-politika [ho an'ny governemanta Kiobàna]. Raha teo ambany fifehezan'i Fidel Castro, tsy ho tonga aminà fifanarahana tahaka izao velively isika. Satria ny rafitra Kiobàna dia tohanan'ny fisian'ny mpanohitra iray mitoetra maharitra — izay no iray isan'ny andry fototra ijoroany. Tsy afaka miaina mifanalavitra i David sy Goliath ary efa ela loatra no teo ambonin'io fifandrafesana io ny milina ideôlôjika no niorina.
Ho an'ireo Kiobàna sy ireo Kiobàna-Amerikàna avy amin'ny fironana politika samiahafa, sarotra ny haka sary an-tsaina ny hoe hitondra ho amin'ny fanindriana ny bokotra hamerina hatramin'ny voalohany ny zavatra rehetra, miainga avy amin'ny toekarena ka hatrany amin'ny zo sivily sy pôlitika ny “fampanaraham-penitra” ny fifandraisana. Fotoana fohy taorian'ny fanambaràna, nanao eson-teny i Antonio Rodiles  mpitarika ny Estado de SATS hoe :
Tsy solosaina iray akory i Kiobà ka hoe azonao ametrahana rindram-baiko iray vaovao dia antenaina hiova ny fiasàny.
Fa izao, raha tsy resahana ny laharam-pahamehana pôlitika, ny ankamaroan'ireo feo dia miara-miaiky fa na i Kiobà, na i Etazonia dia samy tsy hisy hanova haingana sy mora foana ny fomba fanaony. Ny fotoana no hilaza amintsika na hivadika ho fanomezan-toky vaovao momba ny zon'olombelona na tsia, eo amin'ny Kiobà sy Etazonia, ilay lazaina fa “fitsonihana”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/12/29/66775/
 fanekeny mandray tohana ara-bola: https://globalvoicesonline.org/2011/06/13/cuba-activists-bloggers-on-the-cuba-money-project-vimeo-channel/
 lozam-pifamoivoizana iray tamin'ny 2012: https://globalvoicesonline.org/2012/07/24/cuba-pro-democracy-leader-oswaldo-paya-dies-in-car-crash/
 taratasy iray misokatra nalefa ho an'i Barack Obama: http://www.washingtonpost.com/opinions/heres-what-cuba-really-needs-mr-obama/2014/12/19/89aefa06-8790-11e4-b9b7-b8632ae73d25_story.html
 dia naneho fanantenana: http://www.14ymedio.com/blogs/desde_aqui/Nuevo-amanecer_7_1690700914.html
 gazetiboky ety anaty aterineto 14ymedio: http://www.14ymedio.com/blogs/generacion_y/llego-el-di-D-de-los-cambios_7_1690100974.html